Momba anay - TIANJIN CHENG YANG INDUSTRIAL CO., LTD
Izahay dia mirotsaka amin'ny fitaovana avo lenta.
Tianjin Chengyang Industrial Co., Ltd. dia miorina ao amin'ny tananan'ny seranan'i Tianjin any avaratry China. Ny orinasanay manarona faritra 32000 sqm, miaraka amin'ireo mpiasa maherin'ny 200 ary lanja mihoatra ny 15 tapitrisa yuan isan-taona. Ny orinasa dia manana fitaovana famokarana mandroso ary ankehitriny dia manana fitaovana fitenenana mihoatra ny 120 shuttleless rapier, milina fandokoana lamba 3, milina fanamafisam-peo vita amin'ny aluminium 4 ary tsipika famokarana lamba silika iray. Izahay dia mirotsaka amin'ny fitaovana avo lenta. Ny orinasanay dia mandray anjara amin'ny lamba volon'olom-bava vita amin'ny silipo, lamba mihosin-kazo vita amin'ny fonosana PU, lamba vera Teflon, lamba firakotra vita amin'ny foil vita amin'ny alimo, lamba fireproof, lamba firakotra, lamba vita amin'ny vera, izay ampiasaina indrindra amin'ny fanamboarana, fitaterana, elektronika, indostrian'ny simika, fiarovana ny tontolo iainana fiarovana nasionaly sy indostria hafa. Natokana ho an'ny fifehezana kalitao henjana sy serivisy ho an'ny mpanjifa misaina, ny mpikambanay efa za-draharaha dia misy foana hiresaka momba ny zavatra takinao sy hiantohana ny fahafaham-pon'ny mpanjifa. Ny vokatray dia tsy amidy amidy amin'ny tanàna sy faritany rehetra manodidina an'i Shina fotsiny fa amidy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao koa, toy ny Amerikanina, Aostralia, Kanada, Japon, India, Korea atsimo, Holland, Norvezy, Singapore ary ny sisa.
Ny orinasanay dia manana tanjaka ara-teknika matanjaka, avo lenta, famatsiana ara-potoana, serivisy aorinan'ny varotra tsara, laza avo lenta, ny orinasa "fanahy maharitra, hentitra, azo antoka, manavao". Fiheverana ny fitantanana antsipirihany, eto an-tany, mpisava lalana ary miasa . Nanamboatra ny famatsiana akora voalohany ny kilasy voalohany, ny asa tanana mandroso fananganana dia mamatsy ny vokatra kilasy voalohany ho an'ny mpampiasa sy serivisy tonga lafatra. Vonona ny hiara-hiasa amin'ny ankamaroan'ny mpampiasa sy ny olona manam-pahaizana ny orinasa. Ny tanjonay dia ny hamorona lanja ho an'ny mpanjifa, manantena ny fiaraha-miasa aminao!
Milina fiberglass vita amin'ny silikonika
Miezaka manome ny mpanjifa serivisy haingana sy fandefasana ara-potoana. Manana ekipa mpivarotra matihanina ihany koa izahay hiantohana ny fahalavorariana amin'ny mpanjifa. Fifandraisana sy serivisy tsara; Tongasoa eto amintsika ny kaomandy OEM sy ODM. Azontsika atao ny manampy ny mpanjifa hanangana marika manokana avy amin'ny hateviny, lava, loko ary fonosana amin'ny vokatra; manana traikefa fanondranana an-taonany maro izahay, afaka manampy ny mpanjifa hamaha ny fitaterana sy ny maro hafa amin'ny resaka olana. Na ny fisafidianana vokatra amin'izao fotoana izao avy amin'ny katalaoginay na mitady fanampiana injeniera ho an'ny fangatahanao dia azonao atao ny miresaka amin'ny ivon-toeran'ny mpanjifantsika.
Lamba vita amin'ny acrylic Fiberglass, Lamba Fiberglass Aluminized, Fiberglass mifono akrilika, Clot Fiberglass, Lamba lamba vita amin'ny ravin-kazo vita amin'ny kofehy, Lamba vita amin'ny vera vita amin'ny acrylic,